About Us - Wuhan Welead S & T Co., Ltd
MPPT Solar Niandraikitra Controller
PWM Solar Niandraikitra Controller
Solar mamaly ny Inverter
fahaizana asa manavanana
Wuhan Welead S & T Co., Ltd dia Integrated angovo masoandro orinasa manokana amin'ny R & D, famokarana sy fivarotana-masoandro any Wuhan anjara-raharaha mpitandrina Shina. Ny orinasa dia taona, ROHS sy IEC voasoratra anarana.
Amin'ny voasoratra marika LDSOLAR, ny lehibe indrindra dia ahitana zavatra izay mpitandrina PWM masoandro dia aseho an-tanety sy ny Sky Dream Series Dream Series, MPPT masoandro mpitandrina izay mifanitsy amin'ny Dream Tracer Series sy Tracer Dream N Series.
Miezaka isika fikarohana teknolojia vaovao amin'ny rafi-masoandro. Vao tsy ela no maty ny PWM-maso amin'ny 32 potika CPU, ka afaka ny mpitandrina hiasa haingana kokoa sy mafy orina. Tena lehibe indrindra eo amin'ny teknolojia Shinoa mpanamboatra maso.
Isika rehefa mitarika herin'ny masoandro, ho maitso hoavy.
Mba ho azo antoka fa manana ny traikefa amin'ny fampiasana tsara ny maso, dia hanaraka ny vaovao EN62109-1 fitsapana Standard, 62109-2 sy kalitao rafitra fitantanana ny ISO9001 ny anatiny sy ivelany fitsapana hifehezana kalitao.
Ny vokatra tsy ao an-tanindrazana pervail tsena eo ambany ny fampiroboroboana ny varotra anjara fanompoan 'isika, fa koa ny sakany hahazo laza any Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Amerika Atsimo, Afrika sy Eoropa.
OEM sy ODM fanompoana tsy ampy, mifototra amin'ny fifampitokisana, miezaka hitady ny fandresena-fandreseny zava-misy miaraka aminao. Handray foana ianao hitsidika anay any amin'ny tsy hanahirana.
Address: A faritra 2F. NO.6 Changjiang Road Fampandrosoana ara-Toekarena sy ny teknolojia Zone Wuhan Shina